Onye na -emepụta gwongworo na -eburu ngwongwo n'akụkụ CCMIE
Ọrụ: Ibu ngwongwo akpa 20ft
Trailer Chassis: 10000*2500*4000
Oghere: 8X4 axles
Isi iyi ọkụ: Ike agbanyụla
Ọrụ: njikwa ikuku ikuku na onye ọrụ ntuziaka
Onye na-ebugharị akụkụ, anyị nwekwara ike ya dị ka gwongworo na-eburu akụkụ ma ọ bụ kpọọ ya dị ka ụgbọala na-adọkpụ na-eburu onwe ya. Igwe a bụ ụzọ dị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ahịa maka ịkwanye, ebufe na ibudata arịa na ibu ndị ọzọ. Ọ nwere ike inyere gị aka inweta azụmahịa ọhụrụ, wetara gị ndị ahịa karịa ma mụbaa ego ị na -enweta n'ahịa ebe azụmahịa njikwa akpa na -abawanye mgbe niile.
Ụgbọ ala na -ebutu akụkụ nwere ike ijikwa igbe mbupu na ibu ndị ọzọ site na/gaa trailers, gwongworo ma ọ bụ ụgbọ oloko, ma ọ bụ ozugbo na ọkwa ala, ebe enwere ike ịkwakọba ma ọ bụ kwachaa ha n'enweghị nsogbu.
Anyị na -emepụta kreenụ nke enwere ike itinye n'elu gwongworo ma ọ bụ ụgbọala na -adọkpụ, enwere ike iji obere ikike rụọ ọrụ n'akụkụ, nwere ike ịchekwa ego gị, na -enweghị ngwa ọzọ ọ bụla, onye na -eburu akụkụ nwere ike belata oge ichere, ma nwee ike ịhazi ya ka ọ nwee ike ịnyefe enweghị nsogbu. , ọrụ asọmpi
CCMIE anyị na-enye ngwaahịa na ngwọta dị mma dị elu yana enyemaka klaasị mbụ maka ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ụgbọ njem, ndị ọrụ n'ime ụlọ na-akwakọba akpa na ndị ọrụ ndị ọzọ chọrọ gwongworo n'akụkụ anyị. Anyị aghọọla onye nrụpụta ọkachamara na ngalaba a kemgbe mmalite narị afọ nke 20 wee nwee nnukwu akụ maka ngwaahịa na njikwa. Ahụmịhe bara uru nke gwongworo akụkụ akpa akpa China na akpa ruru stacker bụ ndị ahịa kwadoro ya! N'agbanyeghị ihe ị chọrọ, anyị kwesịrị ime ike anyị niile iji nyere gị aka. Anyị ji obi ụtọ nabata ndị na -azụ ahịa si n'akụkụ ụwa niile ka ha na -akwado anyị ma na -etokọ ọnụ.
Ngwa ndị na -ewu ewu China onye na -eburu akụkụ, onye na -ebugharị ihe, na -akwado ngwaahịa na ndị nrụpụta ihe ngwọta, ụlọ ọrụ anyị bụ nhọrọ kacha mma. Jiri obi ụtọ na -anabata gị ka ị mepee ókè nke nkwukọrịta. Anyị bụ ezigbo ndị mmekọ maka mmepe azụmaahịa ma na -atụ anya nkwado nke gị.
• Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu nke gụnyere ntuziaka ọrụ
• Injinia esenidụt dị maka ịnye ọrụ nka, anyị nwere ike nye ọrụ ịntanetị
• Ọrụ teknụzụ zuru oke,
• Mwepụta ngwa ngwa ngwa maka ndị na -eso ụzọ
• Nzaghachi ngwa ngwa n'oge.
Nke gara aga: Ihe nrịbama ebuli ihe
Osote: Ebuli akpa
Ogwe akpa efu nke dị n'ihu-ZHRS100-6
Trailer Container n'akụkụ
Nnukwu ụdị akpa ahụ erute stacker-ZHRS4540S-5
Nweta ihe nrịba akpa-ZHRS4531-5
6 n'ígwé ruru Stacker-ZHRS4538-6